ह्वाटमोरले राजीनामा दिनुका पाँच कारण – Janasamsad
१३ भाद्र २०७८, आईतवार १२:३९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । डेभ ह्वाटमोर नेपाली क्रिकेटले पाएको हालसम्मै सर्वाधिक ठूला नामका प्रशिक्षक हुन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले गत पुसमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा छनोट मार्फत ह्वाटमोरलाई नेपाली क्रिकेटको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । विश्वकप च्याम्पियन प्रशिक्षक ह्वाटमोरले छोटो समयमै नेपाली क्रिकेटमा ठूलो आशा देखाएका थिए ।
नेपाली टोली भदौ ८ मा ओमान भ्रमणमा निस्केको थियो । ओमान भ्रमणमा नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग दुई ओडिआई र आइसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँग त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज खेल्दैछ ।
तर शुक्रबार नेपाली क्रिकेटको मुख्य पदबाट राजीनामा दिएपछि सम्पूर्ण नेपाली समर्थक, सुभचिन्तक, खेलाडी लगायत सबैमा ठूलो तरङ्ग आएको छ । राजीनामा कारण के भन्ने धेरैको मनमा प्रश्न र जिज्ञासा छ । समग्रमा ह्वाटमोरले नेपाली क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक पदबाट राजीनामा दिनुको मुख्य पाँच कारण यस प्रकार छन् ।
५. बढ्दो उमेरसँगै परिवारसँग बस्ने चाहना
४. कोरोनाले प्रभावित हुनु
ह्वाटमोर नेपालमा एक वर्षभन्दा बढी नबस्ने गरि आएका थिए । ह्वाटमोरले छोटो समयमा नेपाली क्रिकेटलाई केहि योगदान दिन चाहन्थे । तर कोरोनाले निकै प्रभावित पार्यो । ह्वाटमोर माघमा नेपाल आएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलको रुपमा पाँच टि२० आई मात्र खेल्यो । त्रिकोणात्मक टि२० सिरिजमा उनको प्रभाव खेलाडीमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । कोरोना कारण थुप्रैे सिरिजहरु स्थगित भए ।
ह्वाटमोर सफल प्रशिक्षक हुन् । उनी व्यस्त हुन चाहन्छन् । तर कोरोनाको कारण उनले सोचे र योजना अनुसार काम गर्न पाएनन् । नेपाली क्रिकेट लगातार अन्तर्राष्ट्रिय खेल भई राखेको भए सायद उनको सोच परिवर्तन हुन सक्थ्यो ।
३. कम पारिश्रमिक र बढी कर
२. बरोडासँग सम्झौता र राम्रो तलब पाउनु
१. भारतमा भिसा नपाएपछि नेपाल आउनु
ह्वाटमोर सिंगापुर क्रिकेटको मुख्य प्रशिक्षक छाडेपछि भारतीय घरेलु टोली बरोडा सम्हाल्ने तयारी गरेका थिए । उनले २०१९/२० को रणजी ट्रफी सिजन हेर्ने गरि सम्झौता गरेको थिए । उक्त समय अष्ट्रेलियामा रहेका ह्वाटमोरले भिसा समस्या कारण भारत जान पाएनन् । त्यसपछि मात्र उनले नेपाली क्रिकेटसँग एक वर्ष सम्झौता गरेका थिए । किनभने कोरोना कारण एक वर्ष उनी खाली हुने लगभग निश्चित थियो ।
झन्डै साढे २ महिनापछि स्वदेश फर्किँदै झलनाथ खनाल